D.O. ရဲ့ 1st mini album teaser မှာပါတဲ့ ပန်းပုံ​လေးက ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တွေ ပြည့်နှက်နေလည်းဆိုတော့ | Asia News Bar
D.O. ရဲ့ 1st mini album teaser မှာပါတဲ့ ပန်းပုံ​လေးက ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တွေ ပြည့်နှက်နေလည်းဆိုတော့
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ D.O. ရဲ့ 1st solo album က ဒီလကုန်မှာ ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး SM Entertainment ကလည်း teaser ထွက်ရှိမဲ့နေ့တွေကို တိတိကျကျ ထုတ်ပေးခဲ့ပါပြီ။ ဒီလအစမှာ SM က D.O. ရဲ့ပုံလေး တပုံလေးဘဲ တင်ပြီး ပျောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ မနေ့က July လ 11 ရက်နေ့မှာတော့ ပုံ နောက်တစ်ပုံ ထပ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုပုံက D.O. ရဲ့ မျက်နှာတခုလုံးမှာ အသည်းပုံစံနှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ယောင်္ကျားပီသတဲ့ မေးရိုးကိုဘဲ ကွက်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ လှပတဲ့ အဝါရောင် ပန်းလေးတွေက အနည်းငယ်ကွယ်နေပါတယ်။ ခုလို D.O. ရဲ့ မျက်နှာတစ်ဝက်ဘဲ ပါတဲ့ပုံကို EXO official website က တင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Twitter တခုလုံး D.O. ရဲ့ ပုံအကြောင်း ပွထသွားပါတော့တယ်။ Fan တွေက စုံထောက်တွေသဖွယ် ဒီ ပန်းအကြောင်းကို ရှာဖွေဆွေးနွေးနေကြတာပါ။
ဒီပန်းကို decoration အနေနဲ့ D.O. က တွဲရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ ပန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်က အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ Fan တစ်ယောက်ကတော့ ဒီပန်းကို daffodils လို့ ထင်မိကြောင်းဆိုပါတယ်။
ဒီပန်းဟာ အကောင်းဘက်ဆန်ပြီး ယုံကြည်မှုပြည့်ဝတယ် လို့ အဓိပ္ပာယ်ရသလို ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း သင်္ကေတလည်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီပန်းဟာ ဆောင်းရာသီရဲ့ အေးခဲတဲ့ဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ရှင်သန်တဲ့ ပန်းလေးလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ D.O. က သူ့ရဲ့စိတ်ကို ဖော်ပြချင်တာမို့ ဒီပန်းကို သုံးခဲ့တာ ဖြစ်မယ်လို့ ထို fan ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် fan တစ်ယောက်ကတော့ ဒီပန်းလေးဟာ daylily ပန်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုပန်းလေးရဲ့ သင်္ကေတကတော့ ပျော်ရွှင်မှု၊ အချစ်၊ သံယောဇဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ D.O. ဟာ သူ့ album ကို romantic ဆန်ဆန် ရိုက်ချင်တဲ့ အတွက် ဒီပန်းကို သုံးတာ ဖြစ်မယ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
နောက် fan တစ်ယောက်ကတော့ ဒီပန်းဟာ Yellow Jasmine flower ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပန်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ D.O. က EXO L တွေကို သူငယ်ချင်းလိုဘဲ သဘောထားတယ်လို့ ပြောဖူးတဲ့အတွက် ဒီပန်းကို သူ့ album မှာ ထည့်ရိုက်တာ ဖြစ်မယ်လို့ ထို fan က ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
Asia Cele Bar ပရိသတ်တွေရော ဘယ်လို ထင်ပါသလည်း ??? ခုချိန်မှာ ဒီပန်းကို ဘာကြောင့် ထည့်ရိုက်ထားလည်းဆိုတာ သေချာမသိပေမဲ့ ဒီလ 26 ရက်နေ့ MV ထွက်လာရင်တော့ အားလုံးရှင်းသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲ EXO အဖွဲ့က အသံချိုချိုပိုင်ရှင်လေး D.O. ရဲ့ ပထမဆုံး solo album ကို စောင့်ဆိုင်းအားပေးလိုက်ကြရအောင်နော်။
Next ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းများအနက် ပရိသတ်ရွေးချယ်မှုအရ ကြည့်တိုင်းမရိုးနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၀ ခု »
Previous « ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Zhao Liying နဲ့ Yang Mi တို့ရဲ့ တူညီမှု ၈ ခု
M Countdown music show သမိုင်းမှာ 1st Win အများဆုံးရဖူးသူ ပထမနေရာကို EXO နဲ့ TWICE ပူးတွဲသိမ်းပိုက်
IOK Company ရဲ့ Executive Director အဖြစ် တရားဝင်ခန့်အပ်ခံရပြီဖြစ်တဲ့ B.I
“Butter” album ဓါတ်ပုံရိုက်ကူး​ရေးအတွက် ၂ ပတ်လုံးလုံး အသီးအရွက်သုပ်ကိုသာ စားသုံးခဲ့တဲ့ RM
“မဖြစ်နိုင်ဘူး” လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ARMY တွေအား ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ Jimin
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဇနီးသည်ကိုယ်စား BTS ကို ​ကျေးဇူးတင်​စာ ​​ရေးသားခဲ့တဲ့ ​တောင်ကိုရီးယား သတင်း​ထောက် (၁) ဦး